acronym : ekwupụta
Echefukwala -atụle National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”
Emetụta National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”
The KhAI e hiwere na 1930. Akụkọ ihe mere eme na-jikọrọ ha na mmepe nke ugbo elu injinịa na sayensị. The University bụ ma ama n'ihi na ya e kere eke nke mbụ na Europe elu-ọsọ ụgbọelu na a retractable ọdịda gia na e kere eke nke imewe nke turbojet engine mepụtara nkụzi nke KhAI A. M. Liulka onye e mesịa ghọrọ academician na mmebe nke ọtụtụ owuwu nke ugbo elu maqbx chekwebe gụnyere engine nke ugbo elu Su-27.
The KhAI bụ a pụrụ iche elu izi alụmdi ebe ụgbọelu mepụtara site na Institute Design Burean n'okpuru nlekọta nke prọfesọ m. G. Neman mepụtara ha serially na ugbo elu osisi na-agba ọsọ na njem ụgbọ elu.
site 1977 ka 1984 na Designer General O.K. Antonov-agba ọsọ na ngalaba nke ụgbọelu Ọdịdị na KhAI.
na 1978 na KhAI e nyere aha N. unu. Zhukovskiy. na 1980 na Institute e ọdịda na iji nke Lenin. na 1998 ndị N. unu. Zhukovskiy State Aerospace University "Kharkov Aviation Institute" e tọrọ ntọala na ndabere nke KhAI na na 2000 na University nwetara a ọnọdụ nke National elu izi alụmdi na nwetara a aha nke National Aerospace Uuniversity Kharkiv Aviation Institute.
Mgbe oge nke ya adị ndị University zụrụ banyere 60 ths injinia. Karịrị 80% nke ọkachamara na agụmakwụkwọ ka elu na-arụ ọrụ Ukrainian aerospace ebe bụ ndị gụsịrị akwụkwọ na KhAI.
Ugbu banyere 9.5 ths ụmụ akwụkwọ na 160 post-gụsịrị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na-azụ na Mahadum; 650 nkụzi, na- 2.5 ths n'ọrụ na-arụ ọrụ n'ebe a. N'etiti isiokwu e nwere 120 Ọkachamara na Oghere mmeri nke Science. N'etiti ndị nkụzi nke University e nwekwara: 1 USSR State Lenin chọr'inwe-eto eto, 7 USSR State Nrite mmeri, 28 Ukraine State Nrite mmeri, 11 USSR Council nke Ozi Nrite mmeri.
The KhAI bụ otu nke International Association of Universitys; Global Association, Organization of Industry na Airport Technology; ọ bụkwa na International Ndepụta Ngwaahịa na ọ bụ nke Association of elu agụmakwụkwọ njikọ nke Kharkiv obodo INTERVUZ, nakwa dị ka ndị Aerospace Agency of Ukraine.
The KhAI bụ a ngalaba-executor nke ụfọdụ omume nke na-rụrụ na mahadum na ụlọ ọrụ nke USA, Japan, Germany, France, Mexico na Chine. The University, so na-usoro ihe omume nke ihe e kere eke nke "Alfa" mba ohere ojii.
na 1992 na KhAI maliteghachiri ọzụzụ nke ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ n'elu 500 ụmụ amaala obodo ọzọ si 40 mba nke Asia, Africa na America na-azụ kwa afo na Mahadum.
The KhAI ekpuchi a iche iche n'ókèala obodo n'ime oké ọhịa-akụkụ mpaghara, ya ebe ana banyere 25 hectare. The University nwere 8 agụmakwụkwọ ụlọ, Research Institute na laboratories, ọbá akwụkwọ ga- 1 ml olu na ngwaahịa, campus, ikeegwuregwu mgbagwoju, ebe igwu mmiri, preventurium ọgwụ nke mbụ ọgwụ enyemaka, eri, ụlọ akụ, ụmụ ubi, etc.
Admission usoro na National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”
N'ihi emetụta National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute” mba ọzọ ụmụ akwụkwọ na- ide online via Ukrainian Admission Center.
moto ụgbọ njem
Accounting na oditi
Applied mmụta asụsụ
Aircraft na roket ụlọ
Engines na ike osisi nke ugbo elu
Applied mgbakọ na mwepụ
Power igwe ụlọ
Okpomọkụ ike engineering
Akpaaka na kọmputa-ike teknụzụ
Geodesy, cartography, nzukọ nke eji ala
Metrology, Standardization na asambodo
Metrology na informational na atụ teknụzụ
Ọmụmụ ihe dị ndụ, gburugburu ebe obibi na echiche ziri ezi ọdịdị management
Radio-agwa ekwe ntị
Computer nkà mmụta sayensị banyere
Computer si engineering
Commodity nnyocha na azụmahịa enterprise
Ego na kaadị
Economics nke enterprise
The KhAI e hiwere na 1930. Akụkọ ihe mere eme na-jikọrọ ha na mmepe nke ugbo elu injinịa na sayensị. The mahadum bụ ma ama n'ihi na ya e kere eke nke mbụ na Europehigh-ọsọ ụgbọelu na a retractable ọdịda gia na e kere eke nke imewe nke turbojet engine mepụtara nkụzi nke KhAI A. M. Liulka onye e mesịa ghọrọ academician na mmebe nke ọtụtụ owuwu nke ugbo elu maqbx chekwebe gụnyere engine nke ugbo elu Su-27.
The KhAI bụ a pụrụ iche elu izi alụmdi ebe ụgbọelu mepụtara site na Institute Design Bureau n'okpuru nlekọta nke prọfesọ m. G. Neman mepụtara ha serially na ugbo elu osisi na-agba ọsọ na njem ụgbọ elu.
site 1977 ka 1984 na Designer General O.K. Antonov gbara ngalaba nke ụgbọelu Ọdịdị na KhAI.
na 1978 na KhAI e nyere aha N. unu. Zhukovskiy. na 1980 na ulo akwukwo e ọdịda na iji nke Lenin. na 1998 ndị N. unu. Zhukovskiy State Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute" e tọrọ ntọala na ndabere nke KhAI na na 2000 na University nwetara a ọnọdụ nke National agụmakwụkwọ ka elu alụmdi na e renamed na National Aerospace University AKA Kharkiv Aviation Institute.
Ị chọrọ -atụle National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute” ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute” ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”.